HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mixe (Afovoany) Mizo Mongol Mooré Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
“Fantaro tsara ny toetoetry ny andian’ondrinao.” —OHAB. 27:23.
Inona no andraikitry ny ray aman-dreny noho izy ireo toy ny mpiandry ondry?
Inona no hanampy ny ray aman-dreny hamahana ny zanany eo amin’ny lafiny ara-panahy?
Inona no itiavan’ny tanora maro ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana?
1, 2. a) Inona no zavatra sasany tsy maintsy nataon’ny mpiandry ondry israelita? b) Inona no itovizan’ny ray aman-dreny sy ny mpiandry ondry?
MAFY ny asan’ny mpiandry ondry teo amin’ny Israely fahiny. Niaritra hatsiaka sy hafanana, ohatra, izy ireo sady niaro ny andian’ondry tamin’ny bibidia sy ny mpangalatra. Tsy maintsy nojereny matetika ny ondry, ary notsaboiny izay narary na naratra. Nokarakarainy manokana koa ny zanak’ondry satria malemilemy fa tsy matanjaka toa an’ireo efa lehibe.—Gen. 33:13.
2 Misy itovizany amin’ny mpiandry ondry ny ray aman-dreny kristianina. Tsy maintsy manana ny toetra ilain’ny mpiandry ondry mantsy izy ireo. Manana andraikitra hitaiza ny zanany “araka ny fananarana sy ny fomba fisainan’i Jehovah” izy ireo. (Efes. 6:4) Tsy mora izany satria tsy lavorary ny zanany sady tototry ny hevi-diso aelin’i Satana. (2 Tim. 2:22; 1 Jaona 2:16) Ahoana àry no azonao ikarakarana ny zanakao, izay toy ny hoe ondrinao? Ilaina ny mamantatra sy mamahana ary mitarika azy ireo. Andeha hodinihintsika izany.
FANTARO NY ONDRINAO
3. Ahoana no hahafahan’ny ray aman-dreny ‘mamantatra tsara’ ny zanany?
3 Mandinika akaiky ny ondry tsirairay ny mpiandry tsara, sao misy marary ny ondriny. Afaka manao toy izany amin’ny zanakao koa ianao. Hoy ny Baiboly: “Fantaro tsara ny toetoetry ny andian’ondrinao.” (Ohab. 27:23) Ahoana no amantaranao tsara ny zanakao? Mila mandinika ny fanaony sy ny eritreriny ary ny fihetseham-pony ianao. Anisan’ny fomba tsara indrindra anaovana izany ny firesahana matetika aminy.
4, 5. a) Inona avy no azo atao mba handrisihana ny ankizy hiresaka? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.) b) Inona no efa nataonao mba ho mora kokoa amin’ny zanakao ny miresaka aminao?
4 Misy ray aman-dreny mahatsapa fa rehefa mihalehibe ny ankizy dia mihasarotra ny miresaka aminy. Mety ho lasa tia mitokantokana izy ireo, ary ho lasa menatra milaza ny eritreriny sy ny fihetseham-pony. Inona no azonao atao raha lasa hoatr’izany ny zanakao? Ilaina ny miresaka nefa tsy voatery ho lava be sy matotra be izany. Manararaota miresaka aminy rehefa mahazo aina tsara ianareo. (Deot. 6:6, 7) Mila miezaka bebe kokoa mba hiara-manao zavatra aminy angamba ianao, ohatra hoe miaraka mandehandeha na milalao na manao raharaha. Mahazo aina tsara ny ankizy amin’ireny fotoana ireny ka mazoto kokoa hiresaka.
5 Ahoana raha mbola tsy te hiresaka ihany izy? Mitadiava indray fomba hafa. Aza manontany azy, ohatra, hoe nanao ahoana ny tany am-pianarany, fa resaho aminy izay nataonao. Mety hiresaka an’izay nitranga tany am-pianarany ihany izy avy eo. Ary ahoana raha te hahalala ny heviny momba ny zavatra iray ianao? Aza miteny hoe: “Ahoana ny hevitrao?” Anontanio kosa izy hoe ahoana ny hevitry ny namany, ary asaivo lazainy izay torohevitra azony omena azy.
6. Inona no ataon’ny olona vonona hihaino sy mora hatonina?
6 Tokony ho tsapan’ny zanakao hoe afaka mihaino azy foana ianao sady mora iresahana. Tsy hamboraka ny olana mahazo azy mihitsy ny tanora, raha sahirana be foana ny fahitany ny ray aman-dreniny. Tsy ampy koa ny miteny hoe: “Afaka miresaka amiko foana ianao na rahoviana na rahoviana.” Tokony ho tsapan’ny zanakao fa tsy hanao tsinontsinona ny olana mahazo azy ianao, ary tsy tonga dia ho entim-po. Maro ny ray aman-dreny miezaka tsy hanao an’izany. Hoy i Kayla, 19 taona: “Mihaino ahy foana i Dada na inona na inona resahiko. Tsy manapa-teny izy sady tsy mitsaratsara, fa mihaino fotsiny aloha. Omeny torohevitra tena tsara foana aho avy eo.”
7. a) Ahoana no ataon’ny ray aman-dreny mahay mandanjalanja rehefa miresaka zavatra mahasadaikatra toy ny hoe mampiaraka? b) Raha manao inona ny ray aman-dreny no mety hampahatezitra ny zanany?
7 Mety hiresaka zavatra mahasadaikatra ianao sy ny zanakao, anisan’izany ny hoe mampiaraka. Mitandrema mba tsy ho variana loatra mampitandrina azy, ka lasa tsy mampianatra azy izay tokony hataony. Eritrereto hoe tonga ao amin’ny hotely ianao, ary mijery ny tabilao misy ny lisitry ny sakafo. Misy fampitandremana anefa eo hoe mety hisy poizina ny sakafo rehetra ao. Azo antoka fa handeha hitady hotely hafa ianao. Toy izany koa no mety hataon’ny zanakao raha mba mila torohevitra aminao izy, nefa fampitandremana ranofotsiny no omenao azy. (Vakio ny Kolosianina 3:21.) Mahaiza àry mandanjalanja. Hoy ny anabavy tanora atao hoe Emily: “Tsy ataon’i Dada sy Neny hoe ratsy ny mampiaraka rehefa miresaka an’izany izahay. Asehony hoe mahafinaritra ny miezaka hahalala olona iray sy ny mahita vady mety aminao. Lasa tsy menamenatra aho miresaka an’izany amin’izy ireo. Raha hiaraka amin’ny ankizilahy aho, dia tiako ho fantatry ry zareo izany fa tsy hafeniko azy.”
8, 9. a) Inona no maha tsara ny hoe mihaino tsara fa tsy manapa-teny? b) Inona no vokatra tsara hitanao rehefa nihaino ny zanakao ianao?
8 Asehon’ilay tenin’i Kayla fa mora iresahana ianao raha manam-paharetana rehefa mihaino ny zanakao. (Vakio ny Jakoba 1:19.) Hoy i Katia, reny mitaiza irery ny zanany: “Tsy nanam-paharetana tamin’ny zanako mihitsy aho taloha. Notapahiko foana ny teniny. Vizana loatra aho ka tsy te hihaino azy, na tsy te ho voahelingelina fotsiny. Niova anefa aho ka niova koa izy. Lasa mazoto miresaka kokoa izy izao.”
Mihainoa mba hamantarana azy (Fehintsoratra 3-9)
9 Nahita olana toy izany koa i Ronald sy ny zanany vavy 16 taona. Hoy izy: “Tonga dia tezitra be aho rehefa nilaza izy fa nisy ankizilahy tiany tany am-pianarany. Nieritreritra anefa aho hoe tsy mora tezitra sy mahay mandanjalanja i Jehovah, ka tsara kokoa raha avelako hilaza ny fihetseham-pony aloha ny zanako vao manitsy azy aho. Soa ihany fa izany no nataoko! Izay aho vao tena nahatakatra ny fihetseham-pony. Lasa tsara fanahy kokoa aho niresaka taminy rehefa avy nilaza ny heviny izy. Nahagaga fa nihaino tsara ny torohevitro izy ary nilaza fa vonona hiova.” Ho fantatrao kokoa ny eritreritry ny zanakao sy ny fihetseham-pony raha miresaka aminy matetika ianao. Ho hainao kokoa amin’izay ny hanampy azy hanapa-kevitra. *
FAHANO NY ONDRINAO
10, 11. Inona no azonao atao mba tsy ho simba tsikelikely ny fifandraisan’ny zanakao amin’i Jehovah?
10 Fantatry ny mpiandry tsara fa mety hisy ondry hiala amin’ny andiany. Mety ho voasariky ny ahitra eo akaiky eo ilay ondry, ary avy eo hahita ahitra eny lavidavitra kokoa, ka ho tafasaraka amin’ny andiany amin’ny farany. Toy izany koa fa mety hanao zavatra hanimba tsikelikely ny fifandraisany amin’i Jehovah ny zanakao, angamba noho ny namana na ny fialam-boly ratsy. (Ohab. 13:20) Ahoana no hisorohana an’izany?
11 Manaova zavatra haingana raha vao hitanao hoe misy tokony hahitsy amin’ny zanakao. Ampio izy hanatsara ny toetra kristianina efa ananany. (2 Pet. 1:5-8) Mety tsara hanaovana an’izany ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana. Hoy Ny Fanompoantsika Ilay Fanjakana Oktobra 2008: “Ampirisihina ny loham-pianakaviana hiantsoroka ny andraikitra nomen’i Jehovah azy, ka hiezaka hitarika fianaram-pianakaviana tsy tapaka sy hanao izany amin’ny fomba tsara.” Hararaotinao tsara ve ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana mba hanampiana ny zanakao? Matokia fa tena faly izy raha ataonao loha laharana ny fikarakaranao azy eo amin’ny ara-panahy.—Mat. 5:3; Fil. 1:10.
Fahano tsara izy (Fehintsoratra 10-12)
12. a) Inona no soa noraisin’ny tanora sasany avy amin’ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana tsy tapaka? (Jereo koa ilay efajoro hoe “ Tian’izy Ireo Ilay Izy.”) b) Inona no soa noraisinao tamin’ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana?
12 Nandray soa tamin’ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana i Carissa sy ny fianakaviany. Hoy io tovovavy io: “Tiako erỳ ilay izahay miaraka eo daholo dia miresaka. Mampifandray anay izany ary mamela fahatsiarovana mamy ho anay. Ataon’i Dada izay hanaovanay Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana tsy tapaka. Mampahery ny mahita hoe zava-dehibe aminy ilay izy, ka lasa zava-dehibe amiko koa. Tena ray tokoa izy sady mpitari-dalana eo amin’ny fanompoana an’i Jehovah, ka lasa te hanaja azy kokoa aho.” Hoy koa ny anabavy tanora atao hoe Brittney: “Lasa mifandray akaiky kokoa izaho sy ny ray aman-dreniko noho ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana. Hitako hoe tena te hahalala ny olana mahazo ahy ry zareo sady tena te hanampy ahy. Lasa mifandray am-po sy miray saina izahay.” Tena mpiandry tsara àry ianao raha mamahana ny zanakao eo amin’ny lafiny ara-panahy, indrindra raha manao Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana. *
TARIHO NY ONDRINAO
13. Inona no handrisika ny ankizy hanompo an’i Jehovah?
13 Mampiasa tehina ny mpiandry tsara mba hitarihana sy hiarovana ny andian’ondriny. Anisan’ny zava-dehibe indrindra aminy ny mitarika ny ondry ho any amin’ny “kijana feno ahi-maitso.” (Ezek. 34:13, 14) Tsy toy izany koa ve no tanjonao? Te hitarika ny zanakao hanompo an’i Jehovah ianao. Tianao raha mahatsapa ity tenin’ny mpanao salamo ity izy: “Ny manao ny sitraponao no mahafinaritra ahy, Andriamanitra ô, ary ato anatiko ny lalànao.” (Sal. 40:8) Azo inoana fa hanokan-tena ho an’i Jehovah ny tanora mahatsapa an’izany ary hatao batisa. Mazava ho azy fa tokony ho efa matotra tsara sy tena maniry hanompo an’i Jehovah izy vao handray izany fanapahan-kevitra izany.
14, 15. a) Inona no tokony ho tanjon’ny ray aman-dreny kristianina? b) Inona no mety hahatonga ny ankizy hisalasala raha marina ny zavatra inoany?
14 Ahoana anefa raha tsy mandroso ara-panahy ny fahitanao ny zanakao, ary angamba aza misalasala raha marina ny zavatra inoan’ny Vavolombelon’i Jehovah? Miezaha hanampy azy ho tia an’i Jehovah Andriamanitra sy hankasitraka an’izay rehetra nataony. (Apok. 4:11) Ho afaka hanapa-kevitra ny hanompo azy izy amin’izay rehefa vonona.
15 Ary inona no azonao atao raha milaza ny zanakao fa tsy tena mino ny zavatra inoantsika izy? Ahoana no anampianao azy hiaiky fa ny manompo an’i Jehovah no zavatra tsara indrindra azo atao sady hahasoa azy mandrakizay? Iezaho fantarina izay tena mahatonga azy hisalasala. Diniho, ohatra, hoe tena tsy ekeny ve ny fampianaran’ny Baiboly, sa matahotra fotsiny izy hiaro ny finoany eo anatrehan’ny ankizy hafa? Tena tsy manaiky ve izy hoe mahasoa ny fitsipik’i Jehovah, sa izy mahatsapa fotsiny hoe manirery sy ailikiliky ny hafa rehefa mankatò an’izany?
Tariho izy (Fehintsoratra 13-18)
16, 17. Ahoana avy no azon’ny ray aman-dreny anampiana ny zanany handray am-po ny fahamarinana?
16 Afaka manampy ny zanakao tsy hisalasala momba ny zavatra inoany ianao, na inona na inona antony mampisalasala azy. Amin’ny fomba ahoana? Misy fomba hitan’ny ray aman-dreny maro hoe azo ampiharina sy mandaitra. Ataony izay hiresahan’ny zanany ka anontaniany izy hoe: “Tianao ve sa tsia izany hoe Kristianina izany? Inona no hitanao fa maha tsara sy maha ratsy an’ilay izy? Inona no hitanao fa zava-dehibe kokoa, ilay maha tsara azy sa ilay maha ratsy azy? Nahoana?” Mazava ho azy fa tokony holazainao amin’ny fomba fiteninao ireo fanontaniana ireo. Miezaha ho tsara fanahy sy hihevitra izay hahasoa azy fa tsy hanadinadina be. Mety ho azonareo dinihina koa ny Marka 10:29, 30. Azon’ny zanakao soratana ny heviny, ka ataony amin’ny tsanganana roa. Ny iray anoratany ny maha tsara an’ilay hoe Kristianina, fa ny iray anoratany ny maha ratsy azy. Ho hitany amin’izay ny olana sy ny vahaolana. Ampianaro amin’ny boky Ampianarina sy “Fitiavan’Andriamanitra” koa izy. Ny hafa aza ampianarintsika amin’ireo boky ireo, ka mainka fa ny zanatsika! Manao izany ve ianao?
17 Tsy maintsy hanapa-kevitra ny zanakao rehefa mandeha ny fotoana hoe iza no hotompoiny. Aza mihevitra hoe hisafidy ho azy ny hanompo an’i Jehovah izy, satria izay no nataonao. Izy mihitsy no mila mandray am-po ny fahamarinana. (Ohab. 3:1, 2) Raha hitanao hoe sarotra aminy izany, dia ampio izy handinika ny zavatra inoany. Asaivo misaintsaina izy, ohatra, hoe: “Nahoana aho no mino fa misy Andriamanitra? Nahoana aho no resy lahatra fa tena tia ahy i Jehovah? Nahoana aho no mino fa tena mahasoa ahy ny mankatò ny lalàny?” Asehoy fa mpiandry tsara ianao, ka manàna faharetana rehefa mitarika ny zanakao sy manampy azy hahita fa ny manompo an’i Jehovah no tsara indrindra. *—Rom. 12:2.
18. Ahoana no azon’ny ray aman-dreny anahafana an’i Jehovah, ilay Mpiandry Lehibe?
18 Tokony hanahaka an’ilay Mpiandry Lehibe ny tena Kristianina rehetra. (Efes. 5:1; 1 Pet. 2:25) Ny ray aman-dreny indrindra no tokony hamantatra ny toetoetr’ireo ondriny sarobidy, izany hoe ny zanany. Tokony hanao izay rehetra azony atao izy ireo mba hanampiana ny zanany hahazo ny fitahiana omanin’i Jehovah ho azy. Karakarao tsara àry ny ondrinao ka ampio hanaraka ny lalan’ny fahamarinana.
^ feh. 9 Misy soso-kevitra hafa ao amin’ny Tilikambo Fiambenana 1 Aogositra 2008, pejy 10-12.
^ feh. 12 Raha mila fanazavana fanampiny, dia jereo ilay lahatsoratra hoe “Iankinan’ny Aina ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana!”, ao amin’ny Tilikambo Fiambenana 15 Oktobra 2009, pejy 29-31.
^ feh. 17 Miresaka bebe kokoa momba izany Ny Tilikambo Fiambenana 1 Febroary 2012, pejy 18-21.
TIAN’IZY IREO ILAY IZY
Diniho ny nolazain’ny tanora roa mankafy ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana.
“Manampy anao hifandray akaiky amin’ny fianakavianao sy amin’i Jehovah ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana. Lasa fantatrao tsara hoe manao ahoana ny toetranao sy ny fifandraisanao amin’i Jehovah. Hitanao koa hoe inona no tokony hiezahanao.”
“Mahazo aina tsara izahay rehefa Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana, ka afaka mamboraka izay tsapanay. Mifantoka amin’ny ara-panahy izahay amin’io, ka tsy mieritreritra an’izay mampiady saina anay. Tsy nanao fotoam-pivavahana izahay taloha fa izao efa manao. Tena mahafinaritra ilay izy!”
Hizara Hizara Ry Ray Aman-dreny, Karakarao Tsara ny Ondrinareo